February 14, 2020 - Tameelay
မိထားပြီးသားငါးကို ငါးစာနဲ့ထပ်ပြီးမျှားဖို့ ဘယ်တံငါသည်ကမှ မရူးမိုက်ပါဘူး ။
February 14, 2020 Tameelay 0
တံငါသည် . . . ပုံပြင် တစ်ခါတုန်းက ကန်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာ အင်မတန်မှ ရှားပါးလှတဲ့ ငါးတစ်ကောင်ရှိလေသတဲ့ ။ တစ်နေ့ တံငါသည် တစ်ဦးက အဲ့ဒီငါးကြီးကို တွေ့ပြီး မရရအောင် ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်နဲ့ အိမ်ပြန်သွားလေသတဲ့ ။ နောက်တစ်နေ့မနက်ရောက်တဲ့အခါ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ငါးစာ ခိုင်ပေ့ဆိုတဲ့ […]
အတုတွေများလာတဲ့ခေတ်မှာ မေတ္တာတရားအစစ်တွေလဲ ရှားခဲ့တယ် သစ္စာတရားတွေဆို ဘယ်နားမှန်းမသိတော့ဘူး အချစ်စစ်ဆိုတာလဲ မသိသလောက်နီးပါးပါပဲ ခေတ်နဲ့ အညီ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအောက်မှာ တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေနောက်မှာ တဖြေးဖြေး လုံးပါးပါးလာခဲ့တာပါ ချစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ . . . ရင်ခုန်ဖို့ထက် ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေတစ်သီကြီး ခေါင်းထဲပေါ်လာခဲ့တယ် . […]
၀ဋ်ဆိုတာ တစ်ဖက်က သူတစ်ပါးကို မကောင်းကြံလိုက်တာနဲ့ တစ်ဖက်က ကိုယ့်အလှည့်ပြန်ရောက်လာတတ်တာကို မမေ့ပါနဲ့
ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းတာတွေ လုပ်လာတဲ့အခါ ဝဋ်လည်ပါစေဆိုတဲ့ ကျိန်စာလဲ မတိုက်ဘူး သူမကောင်းသလို ကိုယ်လဲပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အာဃာတလဲ မရှိဘူး လက်စားချေရတာ မနှစ်သက်ဘူး ဒါပေမယ့် ဝဋ်လည်တဲ့အခါ ပြုံးပြီးကြည့်နေရတာကိုတော့ သဘောကျတယ် ငါ့ကို ဒီလိုလုပ်ရက်ပါလားဆိုတဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်ကလွဲရင် အမုန်းတရားဘာမှ မရှိပါဘူး ဒဏ်ရာတွေက ရင်ဘတ်ထဲ စွဲကျန်နေရုံပါ အငြိုးတွေ […]
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် မျက်နှာငယ်ချင်တဲ့အခါ ငွေချေးပါ
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် မျက်နှာငယ်ချင်တဲ့အခါ ငွေချေးပါ တဲ့ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေမချေးမိတာ အကောင်းဆုံးပဲ ။ ရင်းနှီးလွန်းတဲ့သူတွေ ခင်လွန်းတဲ့သူတွေ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိတ်ပျက်ရတယ် ငွေ တစ်ထောင်ပဲ ချေးချေး တစ်ရာပဲချေးချေး အတိုးမပါပဲ ငွေချေးလိုက်တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ယုံကြည်မှုကို ပေးလိုက်တာပါ တန်ဖိုးထားစေချင်တယ် […]
ကိုယ့်မှကိုယ် ဖြစ်နေတဲ့လူကို ဆက်ပြီး မရှာတော့ဘူး ။ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပဲ ဘဝကို ဆက်ပြီး လျှောက်တော့မယ် ။တစ်ယောက်တည်းလည်း အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်မ . . . မှီခိုတတ်တဲ့စိတ်ကို အသေသတ်လိုက်ပါပြီ ကိုယ့်ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်မယ့်လူတွေမရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပျော်အောင်ပဲ နေတတ်အောင်နေတယ် တွယ်တာတတ်တာ မကောင်းဘူးလေ […]
သောကဆိုတာလူတိုင်းမလိုချင်တဲ့ လောကရဲ့ လက်ဆောင်ပါ
သောကဆိုတာလူတိုင်းမလိုချင်တဲ့ လောကရဲ့ လက်ဆောင်ပါ ရှင်ဘုရင်မှာလဲ သူ့အပူနဲ့သူ သူဖုန်းစားမှာလဲ သူ့ ဒုက္ခနဲ့သူ နေရာချင်းမတူလို့ သောကချင်းမတူရုံပဲ ရှိတာပါ လူတိုင်းမှာ သူ့အပူနဲ့သူပါ ဒါကြောင့် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နာကျင်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့ တစ်ဖက်သတ်ကြီးမတွေးနဲ့ ငါ့တစ်ယောက်တည်း ကံဆိုးနေတာပါလားလို့လဲ မတွေးနဲ့ လူတိုင်း အဆင်နေကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ လူတိုင်း အဆင်ပြေအောင် […]
ကိုယ်တကယ် လဲပြိုကျသွားတဲ့အခါ အမှန်တကယ်ဆွဲထူပေးမယ်လူက တော်တော့်ကိုရှားပါတယ်
တကယ်တမ်းကိုယ်လဲပြိုကျတဲ့အခါ အမှန်တကယ်ဆွဲထူပေးမယ့်လူက ရှားတယ် ။ အပေါ်ယံလေးအနေနဲ့ အားပေးစကားပြောမယ့်လူတွေ ပြီးတော့ ကူညီချင်ယောင်ဆောင်မယ့်လူတွေတော့ ပေါတာပေါ့ မင်းလဲပြိုကျသွားရင် ပိုပြီး ပျော်မယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ ရှိတယ်ကိုယ်မှားတာထက် ပိုပိုသာသာလေးပြောတတ်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေ ရှိတယ် အပေါ်ယံလေး ပုခုံးဖက်ပေါင်းနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ရှိတယ်တကယ့် တကယ် ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါ အမှန်တကယ် လက်တွဲကူမယ့်လူက တော့ […]
“သတိနဲ့မနေတဲ့စိတ်ဟာအရူးလိုပါပဲ” – မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
မီးလောင်ခံရမှ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ် မထင်နဲ့ ရေနစ်၊ရေကြီးရင်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာပဲ ဆင်းရဲတာမှ ဒုက္ခရောက်တယ် မထင်နဲ့ ချမ်းသာရင်လည်း ဒုက္ခရောက်နေတာပဲ မုန်းမှ စိတ်ပူလောင်ရတာမဟုတ်ဘူး ချစ်ရင်လည်း စိတ်ပူလောင်ရတာပဲ လောကဓံတရားရှစ်ပါးဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေပဲ အပြန်အလှန်ဒုက္ခရောက်နေကြတာလောကဓံမုန်တိုင်းနဲ့ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထားဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာပဲ အရေးကြီးတယ် သက်ဆိုးရှည်တယ်ဆိုတာ လောဘ ဒေါသ မောဟအကုသိုလ်မကင်းပဲနဲ့ အသက်ရှင်နေတာ သက်ကောင်းရှည်တယ်ဆိုတာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများလုပ်ရင်းနဲ့ […]
လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ အနှစ်ချုပ်က ဘာလဲဆိုရင် သူတစ်ပါးရဲ့ စိတ်နေသဘောထားတွေ မသိချင်နေပါစေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေ သိအောင်လုပ်ပါ။ သူများစိတ်ကို မသိတာ ဘာမှ အရေးမကြီးဘူး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သိအောင်လုပ်ပါ။ အဲတော့ သိအောင်လုပ်ဆိုတာဘာလဲ မဟာသတိပဌာနသုတ်မှာ သတိပဋ္ဌာန်လေးမျိုး ဟောထားတဲ့အထဲမယ် စိတ္တာနုပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကို အကဲခတ်စောင့်ကြည့် လေ့ကျင့်တာကိုဆိုလိုတယ်။ ငါ့ စိတ်လေးမှာ […]
February 14, 2020 yoon waddy 0
လူတခ်ိဳ႕က ဘုရားရွိခိုးတာ၊ တရားထိုင္တာေတြဟာ ဆုေတာင္းခ်င္လို႕၊ ကိုယ္လိုခ်င္တာတစ္ခုခုအတြက္ ဘုရားကိုအသံုးခ်ဖို႕ၾကိုးစားေနတာမ်ိဳးလို႕ ထင္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားရွိခိုးတာ၊တရားထိုင္တာဟာ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးတင္မကဘဲ ေလာကီဆိုင္ရာအက်ိဳးေတြလည္း ရေစတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အမူအက်င့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဉ္ဘုရားရွိခိုးျခင္းက ဒီလိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရေစပါတယ္။ စိတ္ၾကည္လင္ေစတယ္ ေန႕တိုင္းဘုရားရွိခိုး၊ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္တရားထိုင္တာကို ပံုမွန္ေလးလုပ္ေပးနိုင္ရင္ ေန႕စဉ္စိတ္ၾကည္လင္မႈကိုျဖစ္ေစျပီး ရက္ေတြၾကာလာတဲ့အခါမွာလည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာၾကံ့ခိုင္မႈအပိုင္းမွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ […]